100 dumar: Waxbaridda dumarka ma xoojisaa tallaalka caruurta? - BBC News Somali
Image caption Canug la siinayo tallaalka dabaysha oo ku nool Karachi, Pakistan
Taariikhda dumarka, awoodooda waxaa lala xiriirinayaa aqoontooda, taas oo la sheegay in ay faa'iido u tahay noloshooda iyo midda caruurtooda.
Dalalka horumaray, cilmi baarid ayaa muujineysa xiriir adag oo ka dhexeeya cilmiga haweenka iyo ka hortagga cudurada la iska difaaci karo sida dabaysha, fuuq-baxa, xiiqdheerta ama kixda, jadeecada iyo tiibishada.
Waxaa la sheegay in rubuc ka mid ah caruurta dhimata ee shanta sano ka yar, cudurada ay u dhintaan in lagaga hortagi karo daawada tallaalada diyaarka ah ee maalin kastaa la heli karo.
Dalalka soo koraya: cilmi badan iyo tallaal badan
Dalalka ka hooseeya Saxaaraha Afrika, tirada caruurta dhimata ka hor inteysan shan sano gaari ayaa aad u badan.
Cilmi baarid dhowaan laga sameeyay Nigeria ayaa lagu ogaaday in boqolkiiba 6, caruurta aysan hooyooyiinkooda wax baran, helaan tallaalka ay u baahan yihiin. Sida guud boqolkiiba 24 ayaa tallaalada oo dhan la siiyaa.
WHO oo billowday ololihii ugu ballaarnaa ee tallaalka cudurka dabeysha
Mashquulka telefoonka 'wuxuu sababaa walwal'
Muuqaalka dalalka caalamka oo dhan ee dadkoodu saboolka yihiin ayaa la mid ah.
Cilmi baarid laga sameeyay Hindiya ayaa lagu ogaaday in aqoonta hooyada ay ku xiran tahay in canuga uu helo dhammaan tallaalada.
Waxaa sidoo kale la ogaaday in hooyada ka baxday dugsiga hoose ama illaa dugsiga sare ay ka fursado badan yihiin kuwa aan waxba baran.
Image caption Gabar indonesia ku nool oo la siinayo tallaalka ka hortagga jadeecada
Cilmi baarid laga sameeyay dalalka hadda soo koraya, ayaa lagu ogaaday in hooyooyiinka aqoonta meel sare ka gaaray ay ku nool yihiin xaafadaha wanaagsan ee laga heli karo daryeel caafimaad oo caruurta lagu tallaali karo.
Laakiin, UNESCO ayaa sheegtay 2015, in dumarka ku nool dalalka saboolka ah ay u baahan yihiin ugu yaraan in ay helaan aqoonta dugsiga sare si ay wax wanaagsan ugu noqoto afar ka mid ah 10-kii canug oo ay helaan tallaalka gowracatada, teetanada, iyo xiiqdheerta.
Dalalka horumaray: is bedelka ka dhacay
Waxaa jirto cadeyn muujineysa in xiriir uu ka dhexeeyo aqoonta iyo tallaalka dalalka horumaray.
Cilmi baarid laga sameeyay Mareykanka ayaa muujisay in tan iyo 2003-dii, caruurta hooyooyiinkooda ay aqoontooda ka hooseyso 12-sano ay dhameystaan tallaalada oo dhan, marka la barbardhigo kuwa waxbarashada ku joojiyay illaa heer koleej.
Cilmi baarayaashu ma hubaan waxa sababay arrinta, balse waxay sheegeen in ay jiraan arrimo dhaqan oo ah garashada waxa canuga u baahan yahay.
Sida guud, tallaalada ma dhameystaan caruurta waalidiintooda aysan helin aqoon rasmi ah ee ku nool Mareykanka.
Sidoo kale hooyooyiinka helo wacyigelinta iyo daryeellada caafimaad ee dowladda ayaa tallaalada caruurtooda.
Cilmi baarid laga sameeyay Yurub, 2016-kii, ayaa lagu ogaaday in dalalka horumaray ee dumarkoodu sida wayn wax u barteen in ay ku kalsoon yihiin tallaalada.
Waalidiinta qaar ayaa cilmi baarid u gaar ah ku sameeya waxtarka tallaalada ama farriimo ayey ka heleen cisbitaallada.
Waxaa sidoo kale yar in ay arkaan caruurtooda oo u dhimanaya cudur laga hortagi karo.
Maqal Waraysi: Daawo cusub ee qaaxada oo lagu daahfuray Kenya
Maqal Dumarkii ugu badnaa oo gudoomiyayaal degmo ka noqday Muqdisho
27 Maajo 2017